Lammiilee Chaayinaa kan hojii albuuda baasuurratti bobba’an uummata oromoo – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooLammiilee Chaayinaa kan hojii albuuda baasuurratti bobba’an uummata oromoo
Lammiilee Chaayinaa kan hojii albuuda baasuurratti bobba’an uummata oromoo qee’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisuun qotee bultoota oromoo hiyyummatti hambise to’annoo isaa jala oolche. Namoonni kunis fayyummaa guutuu kan qaban ta’uu WBO Ajajaa Walii Galaa Beeksise.
Maxxansi kun akka qoosaatti waan ilaalamu miti. Waanti hubatuu qabamu keessaa
Waraanni Bilisummaa Oromoo weerara Oromoo irratti humnoota keessaaf alaan taasifamaa jiru Ittisa jira.
Akka Aadaa fi seera waraana Bilisummaa Oromoo tokkootti qabeenya kee tikfachuuf waamichi ykn deeggarsa faranjii irraa eegamu akka hin jiraanne kan agarsiisu yoo ta’u qabeenya biyya abbaakee ofii kee deeffattee dhiigaan tikfatuun Aadaa keenya waan ta’eef abdii faranjii irraa eegamu kan hin jirreefi waantonni waraanni bilisummaa oromoo taasisu seera idil- Addunyaa eeggate ta’uu quba qabaadhaa.
Lammiilee Chaayinaa Afriikaa irratti madda gabrummaa ta’uun afriikaa hiyyoomsuuf mootummoota Abbootii irree meeshalee deeggarsa waraanaa fi leenjii basaasummaa leenjisuun Lammiilee afriikaa hedduu jiru.
Oromiyaa irratti waraanni bilisummaa oromoo eenyuufiyyuu eeyyama hin laatu.